ICO အကြောင်း: အဘယ်သူသည်လက္ခဏာသက်သေရောင်းအားစဉ်အတွင်းအများဆုံးရန်ပုံငွေများစုဆောင်း - Blockchain သတင်းများ
ICO အကြောင်း: အဘယ်သူသည်လက္ခဏာသက်သေရောင်းအားစဉ်အတွင်းအများဆုံးရန်ပုံငွေများစုဆောင်း
လွန်ခဲ့သောနှစ်တွင်, ICO ရန်ပုံငွေ၏လူကြိုက်အများဆုံးလမ်းခဲ့. သို့သော်ကျွမ်းကျင်သူများကျနော်တို့အတွက်တိုကင်ကိုအရောင်းပို့ချဖို့လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်နည်းမြင်ရပါလိမ့်မည်ကြောင်းထောက်ပြ 2018. အခုတော့ရဲ့ ICO-တခါတရံစဉ်အတွင်းအများဆုံးရန်ပုံငွေများစုဆောင်းထားတဲ့စီမံကိန်းများကိုမှတ်မိပါစေ, စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း.
EOS – ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေး Applications ကိုများအတွက်သြဇာအရှိဆုံးအခြေခံအဆောက်အအုံ
ထက်ပိုပြီး $700 သန်းစုဆောင်း. ICO နေဆဲအပေါ်သွား
EOS ကျတ် applications များ၏ developer များအတွက်ဖြန့်ကျတ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည်. EOS ၏ဖန်ဆင်းရှင်ဒန် Larimer ဖြစ်ပါသည်. သူလည်း BitShares ၏တည်ထောင်သူအဖြစ်လူသိများသည်, Steem, နှင့် BitUSD.
developer များဇွန်လသည်အထိရန်ပုံငွေရှာလုပ်ဆောင်သွားရန်ဆုံးဖြတ်မှတ်သားဖွယ်ဒါဟာဖြစ်ပါသည် 2, 2018. ထိုသို့သောစီမံကိန်းများအတွက်တစ်ဦးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာကာလဖြစ်ပါသည်. အောက်တိုဘာလရဲ့အဆုံးမှာ, အဆိုပါ Launch စကေးမှာ 2017 ကွန်ဖရ Brock Pearce EOS ရဲ့ ICO နီးပါးကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ကွောငျးဖျောပွထားသညျ့ $700 သန်းအတွက် 345 ရက်ပေါင်း, ထိုသို့ကန့်သတ်မဟုတ်ခဲ့. Pearce အဆိုအရ, ဒီ ICO ထက်ပိုမိုစုဝေးစေမည် $1 ဘီလီယံကိုလက်စသတ်ခင်.
ပလက်ဖောင်း developer များအတှကျ Operating စနစ်၏ format နဲ့ blockchain အပေါ် operated ဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါမူလတန်းရည်မှန်းချက်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာများ၏ထိရောက်မှုကိုတိုးတက်စေရန်ဖြစ်ပါသည် (စုံလင်ခြင်းမရှိန့်သတ်ချက်ရှိပါတယ်, ဒီလိုစနစ်များ၏စွမ်းရည်များသာလူ့ဝိညာဏ်အားဖြင့်ကန့်သတ်ထားရှိပါသည်) နှင့်အပြိုင်တွက်ချက်မှုများနှင့်အချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့မှတဆင့်ဒုတိယနှုန်းသန်းပေါင်းများစွာမှသန်းပေါင်းများစွာသောသုံးစွဲသူများ၏နံပါတ်နှင့်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာအမြန်နှုန်းတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် blockchain အပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးရန်. ဤရွေ့ကားစိတ်ကူးများအထင်ကြီးကြသည်. အဆိုပါကွန်ယက်ကိုလည်ပတ် DPoS ကအတည်ပြုလိမ့်မည် (လောင်းကြေး၏လွှဲအပ်သက်သေပြချက်). သောကွောငျ့ဖွစျသညျ, အရောင်းအဝယ်ကတော့ blockchain ပေါ်လာဖို့အတှကျအခြို့သောဒင်္ဂါးပြားနှင့်အတူလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်. တစ်ဦးကကွန်ကရစ်ပုံအခုအချိန်မှာပေးမရနိုငျ, ဒါပေမယ့် POS သတ္တုတွင်း၏နိယာမဆန်းစစ်ဘဲလျက်, ဒါကြောင့်ပိုဒင်္ဂါးပြားသည်သင်၏စွန့်ပစ်ခြင်းမှာဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာ, သင်တစ်ဦးပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုရှာဖွေရန်ရှိသည်ပိုမိုအခွင့်အလမ်းတွေကို. ဤနည်းလမ်းကိုကောင်းစွာလူမှုကွန်ယက်တွင်သက်သေပြနေသည် Steemit, ငွေသွင်းငွေထုတ်အတည်ပြုပေးရန်ပျမ်းမျှအချိန်စက္ကန့်ပိုင်း၏စုံတွဲတစ်တွဲသည်အဘယ်မှာရှိ.
FileCoin – ဒေတာများသိုလှောင်ဘို့တစ်ဦးကဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးစျေးကွက်
FileCoin ဒေတာသိုလှောင်မှုနဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့ကိုယ်ပိုင် blockchain အပေါ်ဖြန့်ကျတ်ကွန်ရက်. ကွန်ယက်ကိုစစ်ဆင်ရေး၏နိယာမသတ္တုတူးဖော်ရေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်; တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်သတ္တုတူးဖော်ရေးများအတွက်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည်. အသုံးပြုသူများ FileCoins လဲလှယ်အတွက်သူတို့ရဲ့သိုလှောင်မှုမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေး.
clients cloud storage ကိုဝယ်သို့မဟုတ်ကွန်ယက်အတွက်မိုင်းလုပ်သားထံမှလိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုတောင်းဆိုခြင်းနှင့် FileCoins နှင့်အတူန်ဆောင်မှုအတွက်ပေးချေ.
မိုင်းလုပ်သား FileCoins ဘို့မိမိတို့သိုလှောင်မှုမှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူအသုံးပြုသူများကိုပေး.
FileCoin ထိုကဲ့သို့သော Storj နှင့် Sia အဖြစ်ပြိုင်ဘက်ရှိပါတယ်. ပထမဦးဆုံးစီမံကိန်းက Ethereum အပေါ်အခြေခံပြီးနှင့်အပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုနှင့်အတူပြဿနာများဖြစ်ပါတယ်, နှင့်ဒုတိယအဖြစ်ကောင်းစွာအတော်လေးနှေး. FileCoin အသုံးပြုသူများနှင့်၎င်းတို့၏ဒေတာတွေနဲ့အပြန်အလှန်ရန်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ယက်နှင့် protocol များကိုအသုံးပြုသည်.
Tezos – တစ်ဦးကနယူးဒစ်ဂျစ်တယ်ဓနသဟာယ
Tezos စစ်မှန်သောဒစ်ဂျစ်တယ်အသိုင်းအဝိုင်းဖန်တီးအသစ်တစ်ခုကျတ် Self-managed blockchain စနစ်. အဆိုပါနည်းပညာကိုတရားဝင်စိစစ်အတည်ပြုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်, သင်္ချာပုစစ်ဆင်ရေးစည်းမျဉ်း code တွေရဲ့မှန်ကန်မှုထေူနှင့်အများဆုံးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောသို့မဟုတ်ငွေရေးကြေးရေးအချိန်စမတ်ကန်ထရိုက်၏လုံခြုံရေးတိုးပွါးရာ.
တစ်နည်းပြောရရင်တော့, developer များလုံခြုံမတ်စာချုပ်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်အတွက်အထူးပြုအသစ်တစ်ခု protocol ၏လွှတ်ပေးရန် Ethereum နှင့်ကြေငြာတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာမိတ်ဆက်. အဆိုပါစနစ်အားအခြေခံတာဝန်များကိုကျေပွန်ရည်ရွယ်နေသည်, ထိုကဲ့သို့သောင့်လင်းမြင်သာအဖြစ်, လုံခွုံရေး, နှင့်အလုပ်၏မြန်နှုန်း. စမတ်ကန်ထရိုက်များအတွက်ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကား, မိုက်ကယ်ကိုခေါ်, အဆိုပါလေကြောင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုကြောင်းနိယာမအောက်မှာတရားဝင်စိစစ်အတည်ပြုသည့်စနစ်ကမ်းလှမ်း.
ထိုကဲ့သို့သောအောင်မြင်သော ICO နေသော်လည်း, စီမံကိန်းကြောင့်တချို့ပြည်တွင်းရေးပဋိပက္ခမှ၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အလွန်အစအဦးမှာတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်. ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူဆွစ်ရန်ပုံငွေ၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အတူတစ်ဦးရန်ပွဲကိုတက်ခူးကြပါပြီ, ရန်ပုံငွေရှာပေးရာ, နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနေဆဲ၎င်းတို့၏တိုကင်စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်. အများဆုံးစိတ်မရှည်သူတွေကိုပြီးသားစီမံကိန်းဆန့်ကျင်အများအပြားတရားစွဲမှုတင်သွင်းခဲ့ကြပေမယ့်.
Bancor – ကျတ် Liquid ကွန်ယက်
Bancor သင် Ethereum တိုကင်တွေကိုသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်အလွယ်တကူရိုးရှင်းတဲ့ကို web ပိုက်ဆံအိတ်သုံးပြီးတစ်ဦးအလိုအလျှောက်တွက်ချက်စျေးနှုန်းမှာတတိယပါတီများမပါဘဲအခြားမည်သည့်တိုကင်သို့သူတို့ကိုငါပြောင်းလဲခွင့်ပြုဖြန့်ကျတ်ကွန်ရက်.
စီမံကိန်း၏အခြေခံစမတ်စာချုပ်များနှင့် cryptocurrency ဖလှယ်မှုကျော်လွှားတိုကင်ဖလှယ်သော Ethereum ကွန်ယက်တစ်ခုတိုးတက်လာသောရှေ့ပြေးပုံစံဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအစာရှောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်, စိတ်ချရသော, နှင့်, အရေးအပါဆုံးကဘာလဲဆိုတာ, လုံခွုံသော. အရောင်းအစမတ်ကန်ထရိုက်များ၏အကူအညီဖြင့်ပြု. “မှော်သင်္ချာနှင့်ထိုကဲ့သို့သောစျေးကွက်အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်ငွေဖြစ်လွယ်မသက်ဆိုင်သည့် volumes ကို၏ထိန်းသိမ်းထားကြောင်းလမ်းနှင့်လဲလှယ်စာရင်းများအတွက်ဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ပုံသေနည်းထဲမှာတည်ရှိသည်,” developer များရှင်းပြ.
ကုမ္ပဏီ၏အောင်မြင်မှုများထက်ပို 50 တိုကင်နံပါတ်စီမံကိန်းများကို, ပါဝါ Ledger အပါအဝင်, ဖယောင်းတိုကင်, သဘောဖွငျ့, နှင့်အခြားသူများ. သူတို့ကရှိပြီးသားကွန်ယက် Bancor ပူးပေါင်းခဲ့ကြ. ကိုးမိတ်ဖက်စီမံကိန်းများပြီးသားသူတို့ရဲ့တိုကင် activated ရှိသည်ဟုနှင့် Bancor လျှောက်လွှာမှတဆင့်သူတို့ကိုဝယ်ရောင်းချနိုင်ပါတယ်. BNT အပြင် (Bancor ကွန်ယက်တိုကင်), လျှောက်လွှာ ETH ထောက်ခံပါသည်, GNO, ENJ, BMC, IND, STX, WISH, နှင့် IQT. စမတ်ကန်ထရိုက်များ၏အကူအညီဖြင့်, ကွန်ယက်ကူးပြောင်း 20.7 သန်း BNT ($58 Bancor များ၏ပျမ်းမျှနှုန်းမှာသန်း).
status – အဆိုပါ Ethereum မိုဘိုင်း OS ကို
ဒါဟာကျတ် applications များတစ်လုံးဝအသစ်သောဂေဟစနစ်ဖြစ်ပါသည် (DApps), သောပလက်ဖောင်း၏အခြားအသုံးပြုသူများနှင့်အတူစနစ်နှင့်အတူအပြန်အလှန်အဖြစ်များအတွက်အဆင်ပြေ interface ကိုအတူအသုံးပြုသူများကိုထောက်ပံ့. ထို့အပြင်, စနစ်လွတ်လပ်စွာတစ်ဦးပိုက်ဆံအိတ်၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုထွက်သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်, တစ်ဘရောက်ဇာ, ပြီးချက်တင်. အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကျတ်သည်နှင့်, ထိုကွောငျ့, ဘေးကင်းလုံခြုံခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်း.
developer များစီမံကိန်းများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရပ်ရွာအပေါ်အလောင်းအစားဖြစ်ကြောင်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်. သောကွောငျ့ဖွစျသညျ, developer များဟာ ICO နိယာမထိုကဲ့သို့သောအခွင့်အရေးမရှိခြင်းကိုဆိုလိုဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိနေသော်လည်းစီမံကိန်းကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့သူတို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်တိုကင်၏ပိုင်ရှင်မှအခွင့်အလမ်းပေး.
အများအပြားကဗဟိုဦး applications များရှိပြီးသားအခြေအနေမှတ်ပုံတင်ပြီ, Gnosis နှင့် Aragon အပါအဝင်.
Gnosis (250,000 ETH စုဆောင်း) ခန့်မှန်းချက်အဘို့ဖြန့်ကျတ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည်. ဥပမာအားဖြင့်, ဟောကိန်းများကျော်ကြားသောလူတွေကဆွေးနွေးခြင်းရည်ရွယ်နိုင်ပါတယ်, သတင်းစာပညာဆွေးနွေး, အနုပညာအကျင့်ကိုကျင့်၏ Pre-လေလံအဘိုးပြတ်, အားကစားလောင်းကစား, စသည်တို့ကို.
TenX – virtual ငွေကြေးပြောင်းနှင့်ဖြုန်း. အချိန်မရွေး. ဘယ်နေရာမှာမဆို
အဆိုပါစင်္ကာပူငွေပေးချေမှုကုမ္ပဏီအဆင်ပြေပြေနဲ့ Fiat ငွေကြေး၏အသုံးပြုမှုအဖြစ်လွယ်ကူသောအဖြစ် cryptocurrencies ၏အသုံးပြုမှုကိုအောင်ကြိုးပမ်း. ဒါကြောင့်, သူတို့ဗီဇာနှင့်မာစတာကတ်ကနေခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့နှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပလပ်စတစ်ကဒ်ထုတ်ပေး. ကဒ်ထုတ်ပေး၏ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ပါသည် $15, သင်မူကားအဖြစ်ကောင်းစွာတရားဝင် website တွင်ယင်း၏ကို virtual ဗားရှင်းအမိန့်နိုင်ပါတယ်. ကဒ်ပေါ်တွင်ကုန်ကျစရိတ်ထက်လျော့နည်းလျှင်အဆိုပါကုမ္ပဏီဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု. အဘို့အနိမ့်ကော်မရှင်အခကြေးငွေကတိပေးထား $1,000 တစ်နှစ်လျှင်. ကဒ်ပေါ်တွင်ကုန်ကျစရိတ်ကဒီအဆင့်ကိုကျော်လွန်လိုလျှင်, ကော်မရှင်အခကြေးငွေကောက်ခံမည်မဟုတ်ပါ.
ယနေ့ခေတ်, စနစ် Bitcoin နှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်, အီနှင့် dash တံခါးပိတ် beta ကို mode မှာရှိနေစဉ်. ERC20 စံတိုကင်၏ထောက်ခံမှုကိုလည်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်, အရာ DGX အတူ Compatibility ကိုဆိုလိုတယ်, rep, ခွငျး, Neo, နှင့်အခြားသူများ. အဘယ်အရာကိုအများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်သင်ကဗီဇာနှင့်မာစတာကတ်လက်ခံသောမည်သည့်စတိုးဆိုင်တစ်ခု TenX ကဒ်နှင့်အတူပေးဆောင်နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ. ဒါဟာ Vitalik Buterin ကထောက်ခံအလွန်အလားအလာစီမံကိန်း.
Civic – အထောက်အထားဂေဟစနစ် Secure
Civic ဝယ်လိုအားအပေါ်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်မှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဂေဟစနစ်တည်ဆောက်ရန်ရည်ရွယ်ထား. အမည်ရ, က blockchain မှတဆင့်ဝိသေသလက္ခဏာစိစစ်အတည်ပြုန်ဆောင်မှုမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုထောက်ပံ့ပေး. ထို့ကြောင့်, Civic အသုံးပြုသူများသည် '' ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များရိုးရှင်းပြီးလုံခြုံ access ကိုပေးနှင့်သူတို့၏ဝိသေသလက္ခဏာကိုအတည်ပြုရန်ပါလိမ့်မယ်.
ဥပမာ, ကုမ္ပဏီကားကိုမဲနှိုက်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် Far East ၏နေထိုင်သူများကမ်းလှမ်း, သာထိုသူတို့အဘို့ကျင်းပလိမ့်မည်သည့်. ကမကထ Civic နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့လျှင်, ထိုလူအပေါင်းတို့သည်သင်တန်းသားများကိုတိုင်းပြည်၏ဤအပိုငျး၏နေထိုင်သူများဖြစ်ကြသည်ရှိမရှိစစျဆေးနိုငျ.
Civic ပြီးသားင်း၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖော်ထုတ်ခြင်းပလက်ဖောင်းတစ်ခု application ကိုဖြန့်ချိလိုက်ပါတယ်, အဆိုပါ Civic လုံခြုံတဲ့အထောက်အထားပလက်ဖောင်းအဖြစ်လူသိများ (သာက iOS version ကို).
Aventus – B2B လက်မှတ်ရောင်းအခြေခံအဆောက်အအုံ
Aventus လုံခြုံနှင့်ပွင့်လင်းလမ်းအတွက်အမျိုးမျိုးသောဖြစ်ရပ်များအတွက်လက်မှတ်တွေဖန်တီးမြှင့်တင်မယ့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်. ထိုအဖြစ်အပျက်၏စီစဉ်သူတို့ကိုယ်သူတို့လက်မှတ်တွေဖြန့်ဖြူးမထိန်းချုပ်ဘူး.
အဆိုပါစီမံကိန်းအားအလယ်တန်းစျေးကွက်များတွင်လက်မှတ်ဖြန့်ဖြူး၏နိယာမအားပြန်လည်စဉ်းစားရန်အဖြစ်လက်မှတ်တွေရောင်းနှင့်ဆက်စပ်သောကိုစည်းကမ်းတကြော်ငြာခြင်းနှင့်တရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများပပျောက်ဖို့ခွင့်ပြု. ထိုကဲ့သို့သော tool ကိုနှင့်အတူ, စီစဉ်လက်မှတ်တွေအဘို့အနိမ့်ဆုံးနှင့်အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်းများကိုသတ်မှတ်နှင့်အလယ်တန်းဈေးကွက်ထဲမှာသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါလိမ့်မည်, အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးပွင့်လင်းမျှတအောင်.
တစ်နည်းပြောရရင်တော့, ကဘေးကင်းလုံခြုံလက်မှတ်စနစ်. Aventus ၏အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်လက်မှတ်ဖြန့်ဖြူးများ၏ concept ကိုပြောင်းလဲစေနှင့်ကကျတ်စေရန်ဖြစ်ပါသည်, ဖြစ်မြောက်ရေးနှင့်အထူးပြုစနစ်များကိုအလိုအလျှောက်ဖြစ်ရပ်များအတွက်လက်မှတ်တွေရောင်းဖို့ခွင့်ပြုထိုသို့များအတွက်ကော်မရှင်ရရှိမည်ဖြစ်သော.
ယခုငါတို့အများအပြားအောင်မြင်သောရုရှား ICO စီမံကိန်းများကိုအထူးအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်.
MobileGo – ဒုတိယဂိမ်းတော်လှန်ရေးကြွလာ
broadband အင်တာနက်ဂိမ်းများကိုလောကီသားတို့သည်အပြောင်းလဲသွားပြီ. လူပျိုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး boring နေကြတယ်, နှင့်ကစားသမားကိုမှန်ကန်အချိန်အတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့ယှဉ်ပြိုင်ချင်. blockchain ၏နည်းပညာ multiplayer ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်တော်လှန်ရေးစေမည်: ယခု cybersport ပြိုင်ပွဲလူတိုင်းရရှိနိုင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်. ဒါကစမတ်လက္ခဏာသက်သေနှင့်အတူပြီးသားရရှိနိုင်ပါသည် MobileGo, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကစားသမားသန်းပေါင်းများစွာကျတ်ပြိုင်ပွဲနှင့် P2P ပွဲအတွက်စည်းလုံးဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်သည့်.
ဖြောင့်ကြောင့်ထားရန်, developer များက e-အားကစားဖြစ်ရပ်များ၏နယ်နိမိတ်ကိုချဲ့ထွင်ချင်, အားလုံးကစားသမားတန်းတူအသုံးအနှုန်းများအပေါ်ပြိုင်ပွဲများတွင်ပါဝင်ရန်ခွင့်ပြုလတံ့သော. ကစားသမားငွေသားဆုများနှင့်အတူအချို့သောအောင်မြင်မှုများအကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်.
ရုရှားသတ္တုတူးဖော်ရေးရေးစင်တာ – တွေအများကြီးသတ္တုတွင်း
ရုရှားကိုင်ပြီးကုမ္ပဏီရုရှားတွင်သတ္တုတွင်းစင်တာများလွှတ်တင်, ထူးခြားတဲ့ဆုံးနဲ့အဆင့်မြင့်မိုင်းလုပ်သားဖွံ့ဖြိုး, Multiclet ကိုခေါ်, နှင့်နေထွက်မိုင်းလုပ်သားထုတ်လုပ်.
ဤစီမံကိန်းများ၏အဓိကအောင်မြင်မှုများစိတ်ကူးတစ် cryptocurrency ငါ့လိမ့်မည်ဟုတစ်ဦး "ASIC-ခံနိုင်ရည်" မိုင်းလုပ်သားဖန်တီးရန်ဖြစ်ပါသည်, ဥပမာ, Ethereum, အကြိမ်ပေါင်းများစွာပိုမိုထိရောက်စွာဂရပ်ဖစ်ကတ်များထက်နှင့်စွမ်းအင်တစ်ခုအနည်းဆုံးငွေပမာဏကိုသုံးပါ. ထိုသို့သောညွှန်းကိန်းတစ်ခုတွေအများကြီး Processor ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်မှတဆင့်အောင်မြင်ခဲ့ခံရဖို့စီစဉ်ထားကြသည်, တစ်ဦးဂရပ်ဖစ်ကဒ် chip ကို၏ဖြန့်ဝေကွန်ပျူတာများ၏ဆင်တူနိယာမအပေါ်အခြေခံပါလိမ့်မည်သည့်.
ယနေ့ခေတ်, ကုမ္ပဏီနိုင်ငံခြား Bitfury ချစ်ပ်နှင့်အတူနေထွက် ASICs ဖြန့်ဖြူး. ပြည်တွင်းကွန်ပျူတာပရိုဆက်ဆာများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတစ်နှစ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ကြာမြင့်မည်. အဆိုပါစီမံကိန်းကိုသတ္တုတွင်းအတွက်ရုရှားတော်လှန်ရေးထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်အကြောင်း,.
INS ဂေဟစနစ် – အဆိုပါကုန်စုံစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ, Reinvented
ဤသည် startup တိုက်ရိုက်အစားအစာထုတ်လုပ်သူများနှင့်သုံးစွဲသူများကိုဆက်သွယ်သောပထမဦးဆုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျတ်ဂေဟစနစ်ဖြစ်ပါသည်.
ရည်ရွယ်ချက်မှာဝယ်လက်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်သူတွေနဲ့အပြန်အလှန်နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ, ကျော်လွှားလက်လီအရောင်းဆိုင်များနှင့်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားမဖွစျနိုငျသောအခြားကြားခံ. လက်လီရောင်းချသူများအများအားဖြင့်သုံးရင်သူတို့ရဲ့ဈေးကွက်ပါဝါ: သူတို့စျေးနှုန်းများ overcharge နှင့်အသေးစားကုန်သည်များဖိနှိပ်. ဒါဟာ INS ဂေဟစနစ်နှင့်အတူဖြေရှင်းနိုင်မယ့်ဘုံပြဿနာဖြစ်ပါသည်.
SONM – universal Fog စူပါကွန်ပျူတာ
အဆိုပါစီမံကိန်းကိုမြူကွန်ပျူတာများအတွက်ဖြန့်ကျတ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစူပါတစ်ဦးအယူအဆကိုယ်စားပြုတယ်. အဆိုပါ Ethereum ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ကျတ် operating system ကိုကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်စွမ်းရည်၏အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက်တာဝန်ရှိသည်. ဒီစနစ်တစ်ခုတည်းကွန်ပျူတာ network ထဲသို့ပင်ကမ္ဘာတဝှမ်းကွန်ပျူတာသန်းပေါင်းများစွာထောင်ပေါင်းများစွာပေါင်းစပ်သို့မဟုတ်နိုင်သောဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုအထူးပြုအပိုင်းအစဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာဖြစ်နိုင်ပါကွန်ပျူတာနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုမဆိုအမျိုးအစားထဲမှာစံချိန်ချိုးရလဒ်များကိုအောင်မြင်ရန်စေမည်, ဒါဟာဆေးပညာ DNA ကိုတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းအတွက်မော်လီကျူး၏နံပါတ်တွက်ချက်ထားခြင်းရှိမရှိ, သို့မဟုတ်ဝေးကွာသောအာကာသသုတေသန, သို့မဟုတ်ကမ္ဘာမြေနှင့်အခြားဂြိုလ်ပေါ်အသက်တာ၏မျိုးစိတ်အသစ်ရှာဖွေနေ.
Previous Post:ဘယ်လို ICO Market ကပြောင်းလဲကြလိမ့်မည် 2018?
Next Post:Blockchain သတင်းများ 8 ဇန္နဝါရီလ 2018